ပြီးပြည့်စုံသော AppLock (App Protector) | Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » စုံလင်သော AppLock (App ကိုကာကွယ်ပေးသူ)
★ Google TOP 20 အပလီကေးရှင်း။
** အခမဲ့ဗားရှင်း၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးသည် Pro version နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ (အကန့်အသတ်မရှိ!) **
ပြီးပြည့်စုံသော AppLock! PIN, Pattern သို့မဟုတ် Gesture တို့နှင့်သင်လိုချင်သည့်မည်သည့် application ကိုမဆိုကာကွယ်နိုင်သည်။ သင်သည်သော့ခတ်နိုင်သည်: Whatsapp, Facebook, Twitter, Skype, SMS, အီးမေးလ်၊ ပြခန်း၊ ကင်မရာ၊ USB ဆက်သွယ်မှု၊ ချိန်ညှိချက်များနှင့်သင်ရွေးချယ်သည့်မည်သည့်အက်ပ်မဆို။
ကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ? အဆိုပါ + 1 button ကိုနှိပ်ပါ။
* အခမဲ့ဗားရှင်း (ဗားရှင်း / ကြော်ငြာများ)
1 ။ မည်သည့်အက်ပ်ကိုမဆို pin, pattern သို့မဟုတ် gesture ကို အသုံးပြု၍ ပိတ်ပါ။
2 ။ မျက်နှာပြင်စစ်ထုတ်ခြင်းပံ့ပိုးမှု - တစ် ဦး ချင်းအက်ပ်များ၏မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုကိုထိရောက်စွာစီမံနိုင်သည်
3 ။ အက်ပ်တစ်ခုချင်းစီတွင်မလိုလားအပ်သောမျက်နှာပြင်လည်ပတ်ခြင်းကိုတားဆီးသည်
4 ။ Watchdog: 3rd သည်စကားဝှက်ကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်ပြီးနောက် built-in ကင်မရာသည် attacker ၏ဓာတ်ပုံကိုရိုက်သည်။
5 ။ WiFi, 3G ဒေတာ၊ သော့ခတ်ခြင်း၊ စည်းညှိခြင်း၊ USB (သော့ခတ်ပိတ်ခြင်း) (MTP ကိုမပံ့ပိုးပါ)
6 ။ မူလမြင်ကွင်းကိုပိတ်ခြင်း၊ အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများကိုပိတ်ခြင်း၊ အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများကိုပိတ်ခြင်း၊ သော့ခတ် App ထည့်သွင်းခြင်း / ဖြုတ်ခြင်း
7 ။ အချိန်၊ WiFi အခြေခံသော့ခတ်ခြင်းမူဝါဒကိုထောက်ခံသည်။
8 ။ Popup အတု - သော့ခတ်ထားသော app ကိုဖွင့်သောအခါအမှားအတုအတုကိုပြသည်။
9 ။ အသုံးပြုသောအနည်းဆုံးအရင်းအမြစ်။
10 ။ SMS command ကို သုံး၍ AppLock ဝန်ဆောင်မှုကိုအဝေးမှစတင်လိုက်ပါ။
11 ။ Gesture, Pin၊ ပုံစံ၊ စာသားစကားဝှက်ကိုထောက်ပံ့သည်။
- ဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်ပြုချက် - Stealth Mode အင်္ဂါရပ်အတွက်။ (Stealth Mode မှလွှတ်တင်သည့်အိုင်ကွန်ကိုဖျောက်ထား)
- SMS ခွင့်ပြုချက် - အဝေးထိန်းစနစ်အတွက် (သင် SMS မှတစ်ဆင့် AppLock ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်နိုင်သည်)
- ရုပ်ပုံခွင့်ပြုချက်ကိုယူ: စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကအင်္ဂါရပ်များအတွက်
* AppLock ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်စတင်သည်မွမ်းမံမှုများတစ်ခုချင်းစီလိုအပ်သည်
* Stealth Mode အတွက် 'ဖုန်းခေါ်ဆိုခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်
အကယ်၍ သင့်တွင် launcher နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုပါကတစ်ခုကို default အဖြစ်ရွေးရမည်
* Perfect AppLock သည် HTC wildfire ကဲ့သို့သေးငယ်သည့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားဖုန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါ
* သင်သည်အမြောက်အများဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါက (100 - 200 မိတ္တူများနှင့်ထိုထက်မက) လိုအပ်ပါကအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ PayPal ကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် AppLock ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့ပါမည်။ AppLock apk ဖိုင်သည်စက်များစွာပေါ်တွင်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။
* သင်သည်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကို (သင်၏ဘာသာစကားဖြင့်အင်္ဂလိပ်) ဘာသာပြန်ခြင်းကိုထောက်ခံလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ AppLock တွင်အင်္ဂလိပ်စာမှားယွင်းမှုတစ်ခုခုရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
** Android 5.1.1 Lollipop 100% သဟဇာတဖြစ်သည်။
* v7.3 - ပုံသေတင်ပြထားသောချို့ယွင်းချက်များ (17 အောက်တိုဘာ 2016)
* v7.2.1 - ချိန်ညှိချက်များတွင်အနက်ရောင် / အဖြူရောင်အခင်းအကျင်းကိုရွေးရန်ရွေးစရာတစ်ခုထပ်ထည့်သည်။
* v7.2: Android 5.1.1 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျရမည် (06 Sep 2015)
ပြီးပြည့်စုံသော AppLock (App Protector)
6.71 ကို MB
အောက်တိုဘာ 24, 2016
Morrison Software များ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 17, 2017 မှာ 8: 02 နံနက်
ကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းကို uninstall လုပ်ပါပြီ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏မီဒီယာဖိုင်များပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်အားကူညီပေးပါ။ မကြာမီပြန်လည်ဖြေဆိုပါ…
မတ်လ 28, 2014 မှာ 7: 33 နံနက်
ငါအရမ်း vry ကြိုက်တယ်
မတ်လ 11, 2014 မှာ 8: 57 ညနေ
ကျွန်ုပ်သည်စကားဝှက်မပါဘဲမည်သည့် download ကိုမဆိုတားဆီးလိုပါသည်။ $ ၀ ယ်ရုံတင်မက data များကိုရပ်တန့်ရန်။ ဒါလုပ်နိုင်မလား
ဇန်နဝါရီလ 27, 2014 မှာ 6: 57 ညနေ
ငါ့ကို add ပေးပါ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2013 မှာ 5: 08 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2013 မှာ 4: 43 ညနေ
App Protector PRO ကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည် App ကိုဖွင့်ရန်မလွယ်ကူသော်လည်းကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုမေ့သွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ G-mail စကားဝှက်နှင့်ဂူဂဲလ်နှင့်အတူ Authenticate မှပြန်လည်ရယူခြင်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုပြန်လည်ရယူရန်သင့်အကူအညီလိုပါ
ဇန်နဝါရီလ 3, 2014 မှာ 12: 08 နံနက်
ကျေးဇူးပြု၍ app developer: morrison.android.software [at] gmail.com နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
မတ်လ 25, 2014 မှာ 2: 58 ညနေ
ap k pass ကဒ်ငါ့ကို Ka setup ကို hoga na ဖြစ်ပါတယ်။ to ap to သည်ကျွန်ုပ်၏ application သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါသည်။ OK you ho jahega ။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 9, 2013 မှာ 10: 42 နံနက်
plz ငါ့ကိုကူညီပါ။ .. ကိုယ့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်
အီးမေးလ်ခလုတ် ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
SHEKHU Khan says:
နိုဝင်ဘာလ 24, 2013 မှာ 8: 05 ညနေ
ဇူလိုင်လ 12, 2013 မှာ 4: 04 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2012 မှာ 7: 08 နံနက်
ကျွန်ုပ်သည်ပြီးပြည့်စုံသော App Protector ကိုကောင်းစွာကြိုက်နှစ်သက်သည်
နိုဝင်ဘာလ 11, 2012 မှာ 4: 30 နံနက်
ကျွန်ုပ်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုမေ့သွားပြီးအီးမေးလ်ခလုတ်မရှိပါ။ ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ
ဇူလိုင်လ 19, 2012 မှာ 1: 12 ညနေ